SmartDocs: Gadzirisa Microsoft Word Repository | Martech Zone
SmartDocs: Gadzirisa Microsoft Word Repository
Chipiri, May 31, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mazhinji eB2B Ekushambadzira zvikwata anozviwana ivo vachinyora mazano (RFPs) uye zvekushambadzira zvinhu mukati Microsoft Word kakawanda uye kakawanda. Kana bhizinesi rako ratanga kukura, iwe unoona kuti une zvinyorwa kwese kwese. Isu tinoshandisa Google Docs kune edu vatengi zvinyorwa uye kubatana. Tinoshandisa Tinderbox yeyedu proposal repository.
Sezvo ruzhinji rwemakambani emakambani ari kuramba achishandisa Microsoft Word kunyora zvinyorwa zvavo… hapana nzira iri nyore yekumisikidza izvo zvinyorwa. ThirtySix Software ikambani yedunhu yakaratidza munguva pfupi yapfuura yavo Microsoft tekinoroji-yakavakirwa repository system pa Verge - musangano wemwedzi wega wega unotarisisa kutanga kukuru mudunhu.
Kushandisa Microsoft Sharepoint masevhisi, ThirtySix Software yakagadzira SmartDocs kupindura yakatarwa - asi hombe - dambudziko. Makambani makuru ane matani ezvinyorwa aive asina nzira yekuronga, kutsvaga, uye otomatiki kubatanidza zvinyorwa zvekushandisa kwakasiyana. Iye zvino vanoita ne SmartDocs. SmartDocs ndeye zvemukati manejimendi uye zvemukati shandisazve mhinduro mu Microsoft Word.
Pfungwa dzeSmartDocs maficha:
Zivisa yatove yakanyorwa uye yakatenderwa zvemukati kuti ikasike kugadzira nyowani Microsoft Word zvinyorwa.
Shandisa zvakare zvinyorwa, matafura, magirafu, uye machati zviri nyore Microsoft Word zvinyorwa.
Shandisa zvinyorwa zvine mamiriro kuti ugadzire misiyano yakawanda yekubuda kubva kune rimwe gwaro reMicrosoft Word.
Bvisa zvisingaenderane uye zvechinyakare zvemukati zvine proactive shanduko Notices uye otomatiki meseji.
Inoshanda nenhaka Microsoft Word zvinyorwa. Hapana gwaro rekushandura rinodiwa.
Inobatana nechero gwaro manejimendi manejimendi.
Ramba uchichengeta zvinyorwa zvako munzvimbo imwechete yaunoshandisa nhasi.
Dzimwe nhengo dzevateereri dzakabvunza nezve hurongwa hwekambani hwekushanda nekubatanidza pane mamwe mahofisi ehofisi. ThirtySix Software yakapindura kuti paisazove nehurongwa hwakadai - iyo sisitimu yakanyorwa muC #, yakagadzirirwa neSharepoint, uye inoshanda zvakanyanya neMicrosoft Word. Ini ndinobvumirana neThirtySix kuti iri zano rakanakisa - musika weMicrosoft wakakura uye mutengo uye kurasikirwa kwakabatana nekukanganisa kuona kwavo kungave kwakanyanya.
kushanya ThirtySix Software kune rumwe ruzivo kana kuratidzwa kwesoftware yavo.
Tags: b2b kasitoma njereb2b kugutsikana kwevatengifaneli inoshumaJesse Garakukosha kwehupenyu hweseltvupenzi
WordPress otomatiki Anopa Zvidimbu
Yemahara eBook: Kuenda kuSocial CRM